हिजो दिनभर : नेकपा विवाद जहाँको त्यहीँ, लकडाउनबारे विज्ञकै मत बाझियो
सत्तासीन नेकपामा देखिएको विवाद अन्त्यका लागि नेताहरू पछिल्लो तीन दिनदेखि निरन्तर छलफलमा जुटे पनि ठोस निष्कर्ष निस्किएको छैन।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच आइतवारबाट हरेक दिन बालुवाटारमा छलफल भइरहेको छ। तर, अझै निकास निस्कन सकेको छैन।
प्रचण्डको तर्फबाट वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र ओलीको तर्फबाट संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई साथ राखेर छलफल भए पनि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो।
मंगलवार साँझको छलफलमा प्रचण्ड र खनालले स्थायी कमिटी बैठक महिनौंसम्म स्थगित गरेर राख्न नमिल्ने बरु छिट्टै बैठक बोलाउन भनेका थिए।
तर ओली राजी भएनन्। बरु पार्टीभित्रको विवाद अब स्थायी कमिटीबाट हल नहुने भन्दै ओलीले ‘सचिवालय बोलाएर छलफल गरौंला’ भनेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्ति र कामकारवाहीप्रति असन्तुष्ट नेकपाका नेताहरुले दुबै पदबाट उनको राजीनामा मागेका थिए। त्यस यता ओली स्थायी कमिटी टार्दै आएका छन्।
साउन ६ गतेदेखि स्थगित स्थायी कमिटी बैठक राख्ने वारे सहमति जुट्न सकेको छैन ।
मंगलवार साँझ बालुवाटारमा सवा घन्टा चलेको बैठकमा नेताहरुले ओलीको तीव्र आलोचना गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को सोमवारको बैठकले ‘एजेन्ट’को आरोप लाग्दै आएका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य इन्जिनियर सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको सिइओ नियुक्त गरेको थियो।
‘विवादास्पद' व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेर सरकारसँगै पार्टीलाई समेत आलोचनाको शिकार बनाएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता खनालले मंगलवार बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग रोष प्रकट गरेका थिए।
छलफलको मुख्य एजेन्डा पार्टीभित्रको गतिरोध अन्त्यको रहे पनि नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको आलोचना गरे।
नेताहरुले अब उप्रान्त राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पार्टीको परामर्श लिन भनेपछि प्रम ओलीले प्रतिवाद त गरेनन्। बरु परामर्शमा मात्रै नियुक्ति गर्ने जवाफ दिएका थिए ।
ओलीसँगको भेटवार्ताअघि प्रचण्डले मंगलवार बिहान उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग परामर्श गरेका थिए ।
नेकपाभित्रको विवादका कारण असार १० गते शुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ ।
छलफलमा सहभागी नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङका अनुसार पार्टीभित्रको गतिरोध अन्त्यका लागि निरन्तर छलफल गर्न सहमति अनुसार बैठक टुंगिएको हो। बुधवार साँझ ५ बजे पनि अध्यक्षहरुबीच छलफल हुने नेता नेम्वाङले जनाए।
जनस्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन केही समय कडाइ गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । पुनः लकडाउन गर्ने या नगर्ने सम्बन्धमा भने डाक्टरहरूको मत बाझिएको छ ।
कोरोना संक्रमण बढेपछि सरकारको रणनीति बनाउन मंगलवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको बैठकमा विज्ञहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र भीडभाड हुन नदिने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
डाक्टरहरूले जनचेतना फैलाउन, भीडभाड नियन्त्रण गर्न र मास्कलाई अनिवार्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले विगतमा सरकारले लकडाउनको समयको सदुपयोग गर्न नसकेको भन्दै लकडाउन नै विकल्प नभएको बताएका थिए ।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा रवीन्द्र समीरले कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिन लागेकाले विषेश सतर्कता अपनाउनु पर्ने सुझाव दिए ।
‘लकडाउन गरेर आराम गरेर बस्नुभएन, परीक्षण बढाउनुपर्‍यो, अस्पतालको क्षमता बढाउनुपर्‍यो भन्ने सुझाव दिएको छु,’ डा. पाण्डेले भने ।
डा. भगवान कोइरालाले कोरोनाको असर लामो समयसम्म जाने भएकाले दीर्घकालीन योजना बनाउन सुझाव दिएका थिए । ‘कोरोनाको संक्रमण लामो समय जाने भएकाले सरकारले लङ्गटर्म पोलिसी बनाउनुपर्‍यो, टेस्ट बढाउनुपर्‍यो,’ डा. कोइरालाले भनेका थिए ।
डा. महेश मास्के, डा. दिव्या सिंह र डा. समीरमणि दीक्षितले भने लकडाउन आवश्यक नभएको बताएका थिए ।
उनीहरूले पर्याप्त सावधानी अपनाएर जनजीवनलाई सामान्यीकरणतर्फ लैजानुपर्ने बताएका थिए ।
सुझाव सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञहरूको सुझावका आधारमा सीसीएमसीमा छलफल गरेर निर्णय लिने बताएका थिए ।
‘तपाईंहरूको कुरा सुनेँ, जनजीवन सामान्यीकरण गर्न र संक्रमण फैलिन नदिन के उपाय हुन्छ, उपयुक्त निर्णय लिन्छौं’ ओलीले भनेका थिए ।
परामर्श बैठकमा मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला, डा. सन्दुक रुइत, जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र समीर, डा. महेश मास्के, डा. अर्जुन कार्की, डा. शदर वन्त, डा. लोचन कार्की, डा. समीरमणि दीक्षितलगायत सहभागी भएका थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा, जगदीशचन्द्र पोखरेल तथा राजनीतिक दलको तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपाका नेता महन्थ ठाकुर पनि परामर्श बैठकमा सहभागी भए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, संरचना आदि सबै हिसाबले कमजोर रहेको अवस्थामा पनि सबै प्रबन्ध गरेर कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चालेको बताएका थिए ।
‘हाम्रो कार्यान्वयन एकदमै कमजोर रहेको होइन, स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण र संरचनाका हिसाबले हामी कमजोर थियौं,’ ओलीले भने, ‘हामीले यस महामारी आएपछि पूर्वाधार बनाएर सक्षम, सम्पन्न र बलियो स्वास्थ्य पूर्वाधार भएका देशहरूको तुलनामा सफलता हासिल गरेका छौं ।’
कांग्रेस सभापति देउवाले सामाजिक दूरी कायम गर्ने तथा मास्क लगाउने नियमलाई कडाइका साथ पालना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकमा देउवाले ७ बुँदे लिखित सुझाव पेश गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईंले प्रतिदिन १८ हजार जनासम्मको पीसीआर परीक्षण गर्न सक्नेगरी ल्याब स्थापना गरिएको र हालसम्म ४ लाख जनाको परीक्षण गरिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दल नेकपाकै १ सय ५२ जनाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन गरेको हस्ताक्षरप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
मंगलवार आफ्नो सरकारीनिवास बालुवाटारमा प्रतिपक्षी दलका केही नेतासहित जनस्वास्थ्य विज्ञहरूसँगको छलफलमा उनले आफ्नै पार्टीका मान्छेहरू जनता र देशप्रति उदासीन रहेको आरोपसमेत लगाएका हुन् ।
'केही मानिस र केही संस्थाहरूमा अत्यन्त गैरजिम्मेवारीपन देखिन्छ,' उनले भने, 'अन्त खोज्नुपर्दैन मेरै पार्टीमा त्यो देखिन्छ । २५ जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने भनिएको छ तर मेरै पार्टीमा ४ सय ५० को केन्द्रीय कमिटी तुरुन्त चाहियो भनिरहेका छन् ।'
उनले थपे, 'कहाँ बस्ने हो के गर्ने हो त्यसको खोज केही पनि छैन तर बैठक चाहिँ चाहियो भन्ने कुरा मेरै पार्टीमा उठेको छ । स्थायी कमिटी अहिल्यै बस्नुपर्यो, त्यसबाहेक केही छैन भन्ने कुराकानी आएको छ । त्यो देशप्रतिको, जनताप्रतिको गम्भीर उदासीनता लापरवाही र वेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति र आफ्नो स्वार्थका पछाडि कुद्ने प्रवृत्तिहरू निकै व्यापक रूपमा देखिन्छ ।'
उनले त्यो आफ्नो पार्टीमा मात्र मात्र नभएर अन्त पनि यस्तो प्रवृत्ति देखिएको बताए । 'यस्तो प्रवृत्ति सञ्चारमाध्यमहरूमा देखिन्छ,' उनले भने, 'देश यस्तो संकटमा भएका बेला यसलाई एउटा सरकारको विरोध गर्ने माध्यमले जता पल्टाए पनि विरोध, उता पल्टाएपनि विरोध गर्ने । कहिले क्वारेन्टाइनमा राख्यो भन्ने किन राख्यो भन्ने, राखेन भने किन राखेन भन्ने, लकडाउन गरेन भने किन गरेन, भन्ने लकडाउन गर्योख भने किन गर्योर भन्ने, अनि मान्छे उचाल्ने मान्छे भड्काउने ?'
कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणको रणनीति बनाउने क्रममा सुझाव लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको विज्ञसहितको बैठकमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अनुपस्थित भएको खुलेको छ ।
मंगलवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको विज्ञसहितको बैठकमा प्रचण्डका लागि सिट प्लान गरिएको थियो ।
‘पहिलो लहरको छेउको सिटमा प्रचण्डको नाम सहितको सिट प्लान थियो,’ बैठकमा सहभागी एक विज्ञले लोकान्तरसँग भने ।
सत्तारुढ दलको नेताका रूपमा बोलाइएका प्रचण्डलाई पूर्वप्रधानमन्त्री लेखेर सिट प्लान गरिएको थियो ।
प्रचण्डपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरका लागि सिट प्लान थियो ।
प्रधानमन्त्रीले विज्ञसँग छलफल राखेको समय मंगलवार बिहान ११ बजे प्रचण्ड भने नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई भेट्न भैंसेपाटी पुगेका थिए ।
विज्ञसहितको बैठकमा ओलीले २५ जनाभन्दा बढी एक ठाउँमा भेला हुन नपाइने व्यवस्था रहे पनि आफ्नै पार्टीका साथीहरूले ४ सय ५० जनाको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन दबाब दिएको गुनासो गरेका थिए ।
पूर्वमाओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य जुनेल जिसीको नेतृत्वमा ३१ सदस्यीय नेकपा (माओवादी) पार्टी केन्द्रीय कमिटी निर्माणको घोषणा भएको छ।
रफत सञ्चार क्लब भक्तपुरमा म‌ंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जनयुद्ध र जनभावनाको मुद्दा सत्तारुढ दल नेकपाले बोक्न नसकेको भन्दै नेकपा माओवादी पुनर्गठन भएको घोषणा गरिएको हो।
पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा जनयुद्धदेखि नै नेकपा माओवादी, माओवादी केन्द्र हुँदै नेकपामा आइपुग्दा पनि पार्टी सत्ताको वरिपरि मात्रै घुमेको, देशको समृद्धि, विकास, राजनीतिक निकास नेकपाबाट नहुने आरोप लगाउँदै उनले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) मा रहेर काम गरेका नेता तथा कार्यकर्ता सङ्गठित भई पुरानो पार्टीलाई ब्युझाउनु परेको भनाइ राखे।
पत्रकार सम्मेलनमा नवगठित नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डेनिस सिंहले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र सर्वाहारा वर्गको मागलाई नेकपाले उपेक्षा गरेपछि आफूहरुले नेकपा (माओवादी) घोषणा गर्न बाध्य भएको बताए।